LIVE ohuru n'abalị 19.00: Derbymatch Holms SK – Kovlands Ọ BỤRỤ | Holmbygden.se
Ihe na 18 Ka, 2016 site Holmbygden.se
Match nke Day Live! Jide n'aka na i nwere nke kacha mma mma gia na ala nri. Bụrụ na nke ọ bụla ọrụaka nsogbu, agbalị kama ohuru ozugbo ejikọta n'okpuru.
Tonight 19:00 na-egwuri “Nordvästras El Clásico” na Holm Vallen na kpochapụwo derby zutere n'etiti Holm SK – Kovlands Ọ BỤRỤ. The egwuregwu ụtọ dị ka na mbụ, nke kacha mma na-na saịtị na a steaming cup of Java na soseji ma ọ bụ burger si miri.
Holmbygden.se livesänder matchen. N'ihi na ndị na-adịghị na-enweghị ike ịga ya na a ukwu vårdrabbning, gaa game dịkwa mma ahụ a website. Dị nnọọ n'ihu egwuregwu rigging obodo akụkọ Fredrik Wikholm igwefoto esokwa egwuregwu ohuru na ọkachamara nkọwa na ọhụrụ ozi ọma na HSK mara ụlọikwuu.
lineup, egwuregwu ọkwa na results, ederede na onye ọ bụla egwuregwu free ebe a!
Tonight si stream (“agbakwunyere” n'elu): https://www.youtube.com/watch?v=CniAUdOSnXo
HSK:site Youtube-Channel: holmssk.se/youtube
ikpeazụ derby, a nchekwa svärd Holm Seger! Ikpeazụ HSK nabatara Kovland na Holm Vallen e afọ atọ gara aga na May 2013 na DM-Shocker, na mgbe 3-3 oge nile we rigo ntaramahụhụ shootout. 6-4 ọgwụgwụ N'ihi dị ka, mgbe na-akpali akpali showdown n'ihu grandstand.
Lee zuru ntaramahụhụ ịse n'elu nke nzukọ ikpeazụ na Holm Vallen n'etiti Holm SK – Kovlands Ọ BỤRỤ.